people Nepal » चीनमा माओपछि देङ् युग हुँदै सी युग सुरु ! चीनमा माओपछि देङ् युग हुँदै सी युग सुरु ! – people Nepal
चीनमा माओपछि देङ् युग हुँदै सी युग सुरु !
विश्व महाशक्ति कहलाएको चीनमा सी जिनपिङको उदयलाई सी युगको सुरुवात मानिएको छ । सीले पूर्ववर्ती राष्ट्रपतिको परम्परागत लिकबाट बाहिर निस्किएर संसारको नेतृत्व गर्न चाहेको प्रष्ट देखिन्छ । चीनको संविधानमा राष्ट्रपतिको दुई अवधि प्रावधान हटाएर जनचाहना अनुरुप जतिपनि रहनसक्ने व्यवस्था गरिएपछि दुनियाँभरी नयाँ तरंग पैदा भएको छ । अनुमान विपरीत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसलाई दूरदर्शी निर्णयको रुपमा स्वागत गर्दै अमेरिकामा समेत एकदिन यस्तै हुनेछ भन्ने भविष्यवाणी गरेका छन् ।
चिनियाँ संविधानमा गरिएको नयाँ संशोधनले जनचाहना मताविक सीले अनन्तकालसम्म चिनियाँ शासन सम्हाल्न सक्नेछन् । त्यहाँका जनताले चाहेसम्म सीले जतिपनि राष्ट्रपति चलाउन पाउनेछन् । पश्चिमा मिडियाहरुले सी नयाँ तानाशाह वा वादशाहको रुपमा उदाएको स्यालहुईंया मच्चाइरहेका छन् । विश्वभरीका समाजवादीहरुले समेत सीको नयाँ कदमको खुलेर तारिफ गरेका छन् ।
सन् १९५३ जुन १५ मा सान्सी प्रान्तमा जन्मिएका सीका पीता माओकालीन क्रान्तिकारी भेट्रान र कुनै समयका उपप्रधानमन्त्री थिए । त्यसैले कतिपयले उनलाई राजकुमार पुस्ताका भनेपछि सांस्कृतिक क्रान्तिताका जेल परेका पिताका पुत्र भएकै कारण उनले पनि ठूलो दुःख र पीडा खप्नुप¥यो । किशोरवयमा सी जत्तिको कष्ट र अपमान सहनु परेका शासकहरु विश्वमा बिरलै होलान् ।
सन् १९६८ मा १५ बर्षको कलिलै उमेरमा सांस्कृतिक क्रान्तिताका सी दुर्गम गाउँमा खेदिए । भोकै गुफामा सुते, भारी बोके । खेत जोते । कठोर संघर्षको त्यो समयले उनलाई स्पात जस्तै दह्रो बनायो । उनको स्वाभिमानी चरित्रको जग त्यही समय हालिएको थियो । मृत्युको मुखबाट उम्किएका सी पक्का कम्युनिस्ट बने । महंत्वाकांक्षी सीले बीस बर्षको उमेरमै भविष्यमा चीनको नेतृत्व गर्ने सपना देखेका थिए ।
मिहेनती सी पढाईमा समेत अब्बल थिए । अनुशासित, मिलनसार र प्रतिभाशाली सीले एकपछि अर्को सफलता प्राप्त गर्दै सन् २०१३ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिव र राष्ट्रपति चुनिए । सीको उदयप्रति त्यतिबेला पश्चिमाहरु खुसी देखिए ।सन् २०१३ जनवरीमा ‘द न्यूयोर्क टाइम्समा स्तम्भकार निकोलस क्रिस्टोफले सीको कार्यकालमा चीनमा आर्थिक र राजनीतिक सुधार तीव्र हुने दाबी गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका पत्रकार आइज्याक स्टोन फिसले ‘द एटलान्टिक’ मा हालै प्रकाशित ‘सी जिनपिङबारे पश्चिमा भ्रम’ शीर्षकको लेखमा सी समाजवादी कम्युनिष्ट शासक भएको दाबी गरेका छन् ।
सीका पितालाई सांस्कृतिक क्रान्तिकालमा दण्डित गरिएको, त्यहीबेला सी ले पनि भयानक दुःख पाएको, उनी नयाँ युगमा हुर्किएको उनकी छोरीलाई अमेरिका पढ्न पठाइएको आदि कारणहरुले सीले पश्चिमा मोडेलको प्रजातन्त्र उदारवादलाई पच्छ्याउँने पूँजीवादी पण्डितहरुको भविष्यवाणी यतिबेला गलत सावित भएको छ । देङ स्याओ पिङको आर्थिक सुधारलाई पच्छ्याए पनि राजनीतिकरुपमा सीले माओको आदर्श बोकेको प्रष्ट छ ।
आप्mना भाषणहरुमा बारम्बार माओलाई ‘कोर्ट’गर्ने साहित्यप्रेमी नेता सीले चालेको भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति माओको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखेलेर फ्याँक्न प्रतिबद्ध सीले भ्रष्टाचारमा मुछिएका बाघ९ठूला नेता० देखि फट्याङ्ग्रा९छोटे नेता० सम्मलाई कारवाही गरिसकेका छन् । उनको ५ बर्षे शासनकालमा मन्त्री जर्नेलदेखि जिल्ला तहसम्मका झण्डै १ लाख भ्रष्टहरुको कठालो समातिसकिएको छ ।
चिनियाँ सभ्यताको प्रतीक मानिएको प्राचीन ‘सिल्क रोड’लाई ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’को रुपमा सीले ब्यूँताएका छन् । विश्वलाई सडक सन्जालमार्फत जोड्ने् र विश्वभरी समृद्धि बाँड्ने सीको महत्वकांक्षी सपनालाई ‘वान बेल्ट वान रोड’ले प्रतिनिधित्व गर्दछ । सी हिंसा र युद्धविहीन विश्व चाहन्छन् । विश्वभरी शान्ति, स्थिरता र विकास बाँड्ने विश्वव्यवस्थाको पक्षमा सी दृढ छन् ।चीनमा माओ युगपछि देङ् युग हुँदै सी युग सुरु भएको छ । दिवंगत क्यूवाली क्रान्तिनायक राष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रोको मूल्यांकनमा सी असाधारण नैतिक तागतयुक्त विश्व समाजवादी नेता हुन। । आणविक महाशक्ति रुससँगको सम्बन्धलाई सीले इतिहासकै सबैभन्दा सुमधुर मोडमा पु¥याएका छन् ।
विश्व समाजवादी शिविरका प्रमुख नेता सीले पूर्व समाजवादी महाशक्ति रुसका जाज्वल्यमान राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिनसँग मिलेर शान्तिपूर्ण नयाँ विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व गर्न खोजेपछि अमेरिकालगायत ‘वेस्टर्न वल्र्ड’ वा हर्ताकर्ताहरुको निन्द्रा विथोलिएको छ । क्षतविक्षत सोभियत संघको मूल भूमि रुसको कमाण्ड सम्हालेका दूरदर्शी देशभक्त राष्ट्रपति पुटिनले रुसलाई आर्थिकरुपमा सम्पन्न र राजनीतिकरुपमा विश्व महाशक्तिको हैसियतमा पु¥याएका छन् ।
शीतयुद्धकालमा अमेरिकाको प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी रुसलाई पुरानै हैसियतमा फर्काउने पुटिन संकल्पकै परिणामस्वरुप चीनसँग पुटिनले रणनीतिक साझेदारी गरेका हुन् । हरेक विश्व मामिलामा चीन र रुस एउटै ध्र्रुवमा उभिएर पश्चिमालाई चुनौती दिन्छन् । फोब्र्स पत्रिकाले लगातार चौथो पटक विश्वको शक्तिशाली शासकको सूचीमा राखेका पुटिनको अर्को शक्तिशाली चिनियाँ शासक सीसँगको जुगलबन्दीले भविष्यमा विश्व राजनीतिको नक्सा बदल्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।देश सानो, ठूलो जे भएपनि सार्वभौमसत्ता बराबरी हुने मान्यता राख्ने सी विश्व शान्तिको पक्षमा उभिन्छन् । अरु देशमाथि हिंसा थोपर्ने, हस्तक्षेप गर्ने पश्चिमा नेताको खिलापमा रहेका सी हरहमेशा उत्पीडित गरीब देश र मान्छेहरुको पक्षमा उभिन्छन् । निमुखाहरुलाई सक्षम बनाउनुपर्ने, दया, मायाँ, भातृत्व, समृद्धि बाँड्नुपर्ने सीको मान्यता रहेको छ ।
व्यक्तिगत र राजनीतिक जीवनमा ‘निट एण्ड क्लिन’ देखिएका शान्त, हँसमुख, स्वच्छ दूरदर्शी र देशभक्त चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ समकालीन दुनियाँका संभवत सबैभन्दा दिग्गज राजनेता र शासक हुन् । एक न्मबर विश्व मशाक्तिको रुपमा चीन र शासकको रुपमा सी जिनपिङको उदयलाई युद्ध, अत्याचार र नवउदारवादी शोषणबाट धकेलिएका देश र समुदायले मखमलीको गलैंचा ओच्छ्याएर स्वागत गर्न चाहन्छन् ।
चीनमा माओ पछिको सर्व शक्तिमान लोकप्रिय जननेताको रुपमा सी स्थापित हुनु नेपालीहरुको निम्ति समेत सुखद परिघटना हो । चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी को नेपाल भ्रमण सुनिश्चित गर्न यही मार्चमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खे स्याङ नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् । आउनुस्, सदैव नेपालीको भलो चाहने, नेपालको विकास र भौगोलिक अखण्डताको निम्ति खुलेर सहयोग गर्ने असल छिमेकी चीन र विश्वको प्रथम महाशक्ति बनोस् र सी जिनपिङ समाजवादी विश्व नेताको रुपमा अमर रहुन् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरौं ।